Akụkọ - Ọ na-agbaji eriri carbon n'ụzọ dị mfe |EWIG
Ụgbọ ala carbon
Carbon Mountain igwe kwụ otu ebe
Igwe igwe mpịachi carbon
Carbon E igwe kwụ otu ebe
Igwe igwe alumini
Aluminom igwe eletriki igwe
Ọ na-agbaji eriri carbon n'ụzọ dị mfe |EWIG
Carbon fiber bụ ihe mejupụtara.Ọ mejupụtara tọn obere ùkwù nke emep uta eri jidesie ọnụ na ihe epoxy.Carbon eriri bụ nnọọ ike mgbe agbatị ma ọ bụ ehulata, ma na-adịghị ike mgbe abịakọrọ ma ọ bụ gụrụ elu ujo (eg a carbon eriri mmanya bụ oké ike ehulata, ma ga-gbawa dị mfe ma ọ bụrụ na a kụrụ hama).carbon eriri etitinwere ike ịkwado ịdị arọ nke onye na-agba ya gbakwunyere ike niile nke onye na-agba ya na-agbakwụnye (nke nwere ike ịfefe ahụ ha ugboro ugboro) ọ dịghị ike ma ọlị.Ihe a niile maka ihe na-erughị ibu nke aluminom ma ọ bụ igwe nchara yiri.
Mana ụfọdụ ụdị ike - dị ka mmetụta dị nkọ - nwere ike imebi eriri na epoxy na-ebelata ihe ahụ, ihe na-adịkarịghị ka ọ nwere igwe.
E wezụga nke ahụ, Mgbe emechara ya nke ọma, eriri carbon nwere ike sie ike karịa ígwè ma dịkwa mma.Ma mgbe emere ya na-ezighi ezi, ihe mejupụtara carbon-fiber nwere ike ịgbaji ngwa ngwa.N'adịghị ka ihe ndị ọzọ, ọ bụrụ na ị na-ikesie ike carbon-fiber akụkụ, ha nwere ike na-akụrisị okporo ụzọ.
Carbon Fiber ọ na-adịgide adịgide?
Fibre Carbon kwụsiri ike na kemịkalụ, na-eguzogide corrosion, ọ gaghịkwa agba nchara.Ọ dị mma ịmara na ihe mejupụtara eriri carbon nwere ike ibute corrosion galvanic mgbe ọ na-akpakọrịta na ụfọdụ ọla.Ọ bụ ezie na ọ gaghị eduga na corrosion elu pụtara ìhè n'oge dị mkpirikpi, ngwaahịa corrosion na-agbakwụnye ma na-eduga ná mmebi na oge.
Ọ dị njọ ịhapụ igwe igwe carbon na anyanwụ?
Fibre carbon na-enwe mmetụta nke ukwuu maka ìhè anyanwụ.Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mkpughe ọ bụla ga-eme ka ohere ha nwere ịrịa ọrịa kansa anụ ahụ dịkwuo ukwuu.Ekwela ka igwe kwụ otu ebe nọrọ na ìhè anyanwụ.
Igwe eriri carbon ọ bara uru?
Mana n'agbanyeghị na ọ dị ọnụ ala karịa mgbe ọ bụla,China carbon fiber eletrik igwe igweka dị ọnụ karịa ọtụtụ aluminom na ígwè ọzọ.Yabụ maka ndị na-achọ igwe kwụ otu ebe na-emebi enweghị ihe ọ bụla na ibu, nnabata ma ọ bụ arụmọrụ, yabụ ee, eriri carbon ga-abụ nhọrọ kachasị mma n'ozuzu ya n'ọtụtụ ọnọdụ.
Igwe ikuku carbon ọ na-agbawa?
Nkwarụ imewe na nsogbu dị n'ichepụta butere ọdịda mberede mberede mgbe ị na-agba ịnyịnya.Carbon anaghị emepụta obere mgbawa nke nwere ike daa ma emechaa dị ka ígwè ígwè ma ọ bụ alloy frame nwere ike, n'ihi na ọ bụ ihe mgbagwoju anya.
Usoro eriri carbon dị mgbagwoju anya, ike na-ejikọta ya na modul nke akwa carbon na usoro ịkpụzi na ọkpụrụkpụ.N'ikwu okwu n'ozuzu, ndịcarbon etiti nke ụlọ ọrụ mmepụta iheadịghị mfe imebi, na àgwà nke carbon frame nwere ike iguzogide nrụgide nke elu ma enweghị ike iguzogide isi.Ya mere, ọ bụrụ na carbon etiti dara n'ala, a ga-enwe ihu ọma naanị lacquer, ma ọ bụrụ na nkume n'ọnụ na-kụrụ, a ga-enwe ihe ize ndụ nke breakage, ma n'ozuzu ọ ga-ike karịa n'ozuzu aluminum etiti.
Gịnị mere carbon fiber na-agbaji ngwa ngwa?
Igwe eriri carbon adịghị mfe ịgbaji, nke a pụtaghị na ọ gaghị agbaji.Ihe ndị a chọrọ maka iji eriri carbon fiber eme ihe na-adịkarị elu karịa nke a na-eji kwa ụbọchị, na ihe gbasara nke puru imebi dịkwa elu.Ike nke ngwá ọrụ mmepụta ihe na-emepụta dị elu karịa ike nke aka anyị.Ọ bụrụ na ị kpachapụghị anya, enwere ike ikpochapụ tube nke carbon fiber kpamkpam.Mgbaji nke tube carbon fiber na-ejikọta ya na ntụpọ nke ya yana ibu nke karịrị ibu ahụ.
The carbon fiber tube bụ nke carbon fiber prepreg mere, na carbon fiber prepreg n'onwe ya na-atụ egwu puncture site nkọ ihe.Akụkụ nke carbon fiber prepreg bụ eriri eriri carbon na ihe resin.Isi ike nke resin n'onwe ya adịghị elu.Ihe kachasị mkpa nke ntanye bụ ịnweta nnukwu nrụgide na obere mpaghara.Ya mere, mgbe eriri eriri carbon na-ezute ihe dị nkọ karị, a ga-enwe nkwụsị.
Tụkwasị na nke ahụ, nguzogide iyi nke tube carbon fiber adịghị elu, na esemokwu ogologo oge nke mpaghara ga-eme ka oke iyi.Mgbe nrụgide gasịrị, ọ ga-agbajikwa.
Igwe igwe eriri carbon fiber na-ewu ewu n'ahịa ka ọ na-adịwanye ebe niile, ọ dịkwa mma maka ndị na-emefu ego.
A na-esi na ngwakọta dị n'etiti eriri carbon na resin mee igwe ndị a, a makwa ha maka ike na ịdịte aka ha.Agbanyeghị, ị nwere ike ịnọ na-eche ogologo oge ole ka igwe eji eriri carbon ga-adịru?Karịsịa atụnyere igwe igwe ọgbara ọhụrụ nke ọdịnala?
Ihe ikpeazụ ị chọrọ ime bụ imefu ego n'ịnyịnya igwe ọhụrụ iji chọpụta na ọ naghị adịgide ogologo oge dịka i chere na ọ ga-adị.Nke a bụ ya mere o ji dị mkpa ime nyocha gị tupu ị gaa n'ihu mee mkpebi.
Obi dị m ụtọ, anyị ga-enye gị ozi niile ịchọrọ iji mee mkpebi dị mma.N'isiokwu a, ị nwere ike ịmatakwu banyere ndụ nchekwa nke igwe eletriki eriri carbon, yana otu ha si enwe ike iguzogide oge.
Carbon eriri igweagaghị agbaji ngwa ngwa n'ihi ihe ndị siri ike a na-eji eme ha.A na-emepụta igwe igwe eriri carbon fiber na-aga n'ihu ma na-emeziwanye ka oge na-aga, ọganihu teknụzụ na akwa na epoxy na-ewere ọnọdụ iji hụ na a na-eji ihe kachasị mma eme ha.A haziri ma wuo freekị igwe kwụ otu ebe n'ụzọ na-eme ka ike dị na mpaghara etiti ebe ọ kacha mkpa.Yabụ, enwere ike iji carbon rụọ igwe igwe kwụ otu ebe nke na-agaghị agbaji ngwa ngwa.
Nakwa nke a, egosipụtara n'ezie okpokolo agba carbon fiber na-eme ka alloy na nnwale ụlọ nyocha, ma ị nwere ike nweta igwe igwe eriri carbon dị iche iche nke nwere oke nguzogide.
N'ezie, nnukwu njehie na mmebi nke na-eme na igwe igwe ikuku carbon enweghị ihe jikọrọ ya na igwe kwụ otu ebe, na ọtụtụ n'ime ha na-adabere na njehie onye ọrụ.Nke a bụ ya mere ọ dị mkpa iji lekọta ma na-echekwa igwe kwụ otu ebe.
mụtakwuo maka ngwaahịa Ewig
carbon fiber electric mpịachi igwe kwụ otu ebe
carbon eriri igwe eletrik ugwu igwe
onye na-eme etiti igwe igwe carbon kacha mma
esi rụkwaa etiti igwe kwụ otu ebe carbon
Otu esi emepụta igwe kwụ otu ebe carbon fiber
Oge nzipu: Dec-25-2021
otu esi echekwa igwe kwụ otu ebe |EWIG
kedu ka ị ga-esi mara igwe mpịaji mpịachi dị mma |...
gịnị kpatara eji igwe mpịaji eme njem|EWIG
20 ″ igwe kwụ otu ebe kwesịrị ekwesị maka ihe ...
mpịaji igwe kwụ otu ebe dị mma maka gịnị|EWIG
Osisi Otu Obodo Chenghaotou, Obodo Chenjiang, Mpaghara Zhongkai High-Tech, Huizhou, Guangdong, China
Kpọọ anyị ugbu a:0086-752-2233951
Teknụzụ Ewig© nwebiisinka 20102021 : Ikike niile echekwabara.